Izitayela ezimfutshane zentwasahlobo | Bezzia
Izitayela ezineemfutshane zentwasahlobo
UMaria vazquez | 20/06/2022 18:00 | Ndinxiba ntoni
Uqinisekile ukuba uninzi lwenu ubushushu bukwenza ukuba ukhuphe iibhulukhwe ezimfutshane zakho kwigunjana. Kwaye kukuba le mpahla yasehlotyeni sele iyindlela yokwenene yokugqiba iimpahla zethu nangona singekatshintshi ixesha. Ngaba ufuna imibono ukuyila Izambatho ezineebhulukhwe ezimfutshane zeBermuda ngentwasahlobo?
Iifutshane zeBermuda ziyakwazi ukulungelelaniswa kwiimpahla ezihluke kakhulu. Yabo ubude bedolo ibenza ibe yindlela efanelekileyo ngakumbi kwiimeko ezithile kuneebhulukhwe ezimfutshane. Ngaphandle kokuyeka ukuba yingubo emfutshane kunye nentsha yokulwa namaqondo okushisa aphezulu.
Unokwenza iimpahla ngeebhulukhwe ezimfutshane ukuze uye emsebenzini, ukonwabela ixesha lakho lokuphumla emva kwemini okanye uyokubona indawo kwiholide yakho elandelayo. Iibhulukhwe ezimfutshane zaseBermuda ingubo enemisebenzi emininzi onokuthi kwakhona ukufumane ngoyilo olwahlukeneyo kunye nemibala, ibe yileyo inemibala engathathi hlangothi eyona idumileyo.
Ndizidibanisa njani iibhulukhwe ezimfutshane?
Ngaba ujonge ukujonga ngeebhulukhwe ezimfutshane ukuba ilungele ukuya emsebenzini? Umphezulu kunye ne-overshirt enebhanti yokumakisha esinqeni ibe ngamahlakani amakhulu kule nto. Emva koko, kufuneka ukhethe kuphela izixhobo ezifanelekileyo, i-medium-heeled sandals kunye ne-shopper, umzekelo.
Enye indlela enokuqwalaselwa yi iisuti ngeebhulukhwe ezimfutshane Ayizizo zonke ezilula ukunxiba kodwa zinokukunika umdlalo omninzi ngokukwazi ukusebenzisa iimpahla zabo zombini kunye nakwahlukileyo. Olu bhejo lwasehlotyeni kwiisuti ezinemibala eqaqambileyo, ziyinto eqhelekileyo!
Izindululo ziphindaphindeka ukuba sifuna ukwenza iimpahla ngeebhulukhwe ezimfutshane ezingaqhelekanga kunye nezingenankathalo. Eli hlotyeni lidibanisa iifutshane kunye ne-top top kunye nehempe iya kuba yinto ekhoyo ngoku. Kwaye awuyi kuphosakela ngokudibanisa iibhulukhwe zakho ezimfutshane kunye ne ihempe yomqhaphu okuchasene. Iimbambo, umzekelo, ziyi-classics ezingangeni ekusebenziseni.
Ngaba usuka kwiibhulukhwe ezimfutshane okanye uhlala ubheja iibhulukhwe ezimfutshane?
Imifanekiso - @fannyekstrand, @iamfanlalisa, @iamfanlalisa, @thestylertalkercom,
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Izitayela ezineemfutshane zentwasahlobo
Amakhitshi anemiboniso: isitya sakho esibonakalayo
Iseti yeManicure - Yenzelwe ntoni into nganye?